NB: Cliquez-na ny sary afahana mijery azy tsara.
Azonao arahina ny Programa maro samy hafa ao amin'ny Radio Advantista Manerantany, tsindrio eo amin'ny SARY FANEHOANA.
25 Martsa - 1er Aprily 2018 ~ Lasy IHOSY
Lasy Goavana ao amin'ny Sahan'ny Mpanompo Vonona (Ampasimpotsy Mantasoa) ~ 01-06 Nov 2018
06 - 11 Novambra 2018 ~ Kongresin'ny Tanora Advantista Antananarivo
Taorian'ny Fitadiavana hevitra mba afahana mampita ireo fiofanana rehetra ho an'ny tanora dia nanapan-kevitra izahay ny hanorina ity Site ity izay nampitondraina ny anarana hoe: "Mpanompo Vonona"
Mba hiparitahan'ireo fitaovana ho enti - mampiofana
Mba hizarana ny Vaovao tsara ho fantatra eo anivon'ny Fikambanan'ny Tanora Advantista (J.A) eo amin'ny sehatra misy rehetra (Conferance Général, Diviziona, Union, Federasiona FMSE, Distrika Fianarantsoa Andrefana, AMAF Tsaramandroso Fianarantsoa).
Miarahaba an'ise amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay Kapitenintsika.
Natsangana ity Site ity mba ho fanampiana antsika Mpitarika sy ny Tanora amin'ny Fiofanana ao amin'ny Kilasim - pandrosoana isaky ny Klioba misy eo anivon'ny Fikambanan'ny Tanora Advantista (J.A).
Marihana fa ireo Fiofanana samihafa ato dia vokatry ny fikarohana tetsy sy teroa tato amin'ny internet sy azo mivantana avy amin'ireo Departemanta samy hafa eo amin'ny Union - Federasiona/Misiona manao Fiofanana eo anivon'ny Fiangonana.
Azon'ise Télécharger-na maimaim - poana avokoa ireo fitaovana hoenti - manofana zaraina ato ireo, nefa kosa aza tazomina ho an'ise samy irery fa mba ampitapitao hitomboan'ireo tanorantsika ho amin'ny Fanompoana, eny na amin'ny alalan'ny fizaran'ise an'ity Site ity amin'ireo reseaux - sociaux fotsiny aza.
Chef Mamy & Chef Moria
AMAF Tsaramandroso - Fianarantsoa
* Manuelle Administrateur
* Sakaiza (Amie)
* Namana (Compagnion)
* Mpanazava (Eclaireur)
* Mpamaky lay (Pionner)
* Mpandeha alavitra
* Mpitarika (Guide)
* Ny Club Ambassadeur
* Fepetra takiana
* Taranja hiofanana
* Taranja Fototra
Vonona mandrakariva - Faly mandrakariva - Vonona hanompo an'Andriamanitra